Boqoradda ayaa ka xayuubisay Amiir Andrew dhammaan cinwaannada milatariga iyada oo ay jirto fadeexad galmo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Boqoradda ayaa ka xayuubisay Amiir Andrew dhammaan cinwaannada milatariga iyada oo ay jirto fadeexad galmo
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Dacwadeeda ka dhanka ah boqortooyada Ingiriiska, Virginia Giuffre waxay ku andacoonaysaa in ay u tahriibisay amiir Andrew galmo ahaan bilyaneerkii hore ee Epstein iyo saaxiibkiis Ghislaine Maxwell oo dhawaan la xukumay.
The UKQasriga Buckingham Palace ayaa soo saaray bayaan kooban maanta isagoo ku dhawaaqaya in Amiir Andrew "xidhiidhka militariga iyo taageeradii boqortooyada" lagu soo celiyay Queen.
Ku dhawaaqista ayaa timid maalin kadib markii qareenada Amiir Andrew ay ku guuldareysteen inay ku qanciyaan a US xaakim in uu meesha ka saaro dacwada xadgudubka galmoodka ee ka dhanka ah boqortooyada ee xagga farsamada. Kiisku wuxuu ku saabsan yahay eedeymo ay soo jeedisay Virginia Giuffre, oo ku andacoonaysa in amiirku uu ku lug yeeshay fal galmo ah 2001-dii markii ay yaraa.
" Iyadoo The QueenOggolaanshaha iyo heshiiska, Duke of York xiriirkiisa milatari iyo dammaanad qaadka boqortooyada ayaa lagu celiyay boqoradda. Duke of York ma sii wadi doono inuu qabto wax shaqo ah oo guud wuxuuna u difaacayaa kiiskan muwaadin gaar ah, "ayaa lagu yiri bayaanka Qasriga.
Amiir Andrew wuxuu dafiray inuu ku xad-gudbay Giuffre, isagoo ku sheegay wareysi uu bixiyay 2019 inuusan waligiis xasuusan xataa inuu la kulmo. Sawir si guud loo heli karo oo ku saabsan boqortooyada, si kastaba ha ahaatee, ayaa muujinaya amiirka oo gacanta ku haya dhexda Giuffre, iyadoo labada lagu sawiray London.
Horaantii Khamiista, in ka badan 150 ka mid ah mujaahidiinta millatariga Ingiriiska ayaa codsi u gudbiyay Queen si ay uga codsato in ay wiilkeeda ka xayuubiso doorkii millatariga ahaa ee sharafta lahaa oo ay u soo bandhigtay fikradda ah in isagana si sharaf-darro ah xilka looga qaado.
"Waxaan si gaar ah uga xanaaqsanahay oo aan uga xanaaqnay in Amiir Andrew uu weli ka sii mid yahay ciidamada qalabka sida oo uu sii hayo darajo militari, jagooyin iyo darajooyin, oo ay ku jiraan ku xigeenka Admiral ee Ciidanka Badda," halyeeyada ayaa ku yiri warqad furan.